ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာ Mugen Makeover ကို ရရှိခဲ့တဲ့ Honda Odyssey ! – MyMedia Myanmar
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာ Mugen Makeover ကို ရရှိခဲ့တဲ့ Honda Odyssey !
တစ်ချိန် တုန်းကတော့ Minivan အမျိုးအစားတွေ ဆိုတာဟာ ပျင်းစရာကောင်းလာတဲ့ မိသားစုစီး Wagon ‌ကားတွေ နေရာမှာ အ ကောင်းဆုံး အစားထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကားတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆိုပါ Minivan တွေက သူ့အရှေ့မှာတုန်းက မိသားစုစီး Wagon ကားတွေလိုမျိုးပဲ ပျင်းစရာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်ကို ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး အဆိုပါ ကားတွေရဲ့နေရာမှာ SUV တွေက ထပ်မံ နာမည်ရလာခဲ့ပြန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အချို့သော နေရာတွေမှာတော့ Wagons တွေက နာမည်ရနေဆဲ ဖြစ်ပြီး Audi RS6Avant တို့လို ကားတွေဆိုရင် အတော်လေးကိုမြန်ဆန် ကောင်းမွန်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်အ တိုင်းအတာ တွေကပဲ ကားတွေရဲ့ ဈေးကွက် အနေအထားကို ဆုံးဖြတ်ပေး သွားလေ့ ရှိတာကို တွေ့ရမှာပါ။ လက်ရှိမှာဆိုရင် လည်း SUV ကားတွေ နာမည် ရလာနေတာကြောင့် Minivan တွေဟာ ပျောက်ကွယ်လုနီးနီး ဖြစ်နေရပေမယ့်လည်း Mugen လို Tuning ပိုင်း အတွက်ကတော့ ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုတာ အချိန်ကာလ ရွေးမနေပါဘူး။
အခုဆိုရင် အဆိုပါ Honda Tuning Company ဟာ မကြာသေးမီမှ အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Honda Odyssey ကို ပြောင်းလဲမှုတွေ အများကြီး ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြလိုက်ပြီး အမြင်ပိုင်း ဆိုင်ရာကို အဓိကထား ပြင်ဆင် ထားတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုလို Tuning ပြုလုပ်ထားမှုမှာ ယခင်လိုမျိုး အပြင် အမြင်ပိုင်းတင်မကပဲ ဒီထက် ပိုတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ရှိအောင် လုပ် ဆောင်ထား ပေမယ့်လည်း အများစုက လိုချင်နေကြတဲ့ Twin-Turbo ကိုတော့ မထည့်ထား ပေးနိုင်သေးဘူးလို့ သိထားရပါတယ်။ အမေရိက ကနေ အားပေးမယ့် သူတွေ အတွက်ကတော့ ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်ပြီး အခုလို ပြင်ဆင် ထားမှုဟာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်း ဈေးကွက် အတွက်ပဲ မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နဂို ကတည်းကကို မြောက်အမေရိက မော်ဒယ်ဟာ သီးသန့်မတူညီ ‌မှုလေးတွေ ရှိနေတာကိုပဲ အမှတ်ရ နေရတော့မယ့် အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အနေနဲ့ မကြာသေးမီကမှ အဆိုပါကားကို အဆင့် မြှင့်တင်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အနေအထားကို ကြည့်ကြရ အောင်ပါ။ Carbon Fiber Chin Spoiler ကို ယခင်ကထက် ပိုပြီးနိမ့်တဲ့ နေရာမှာ ပြောင်းလဲတပ်ဆင် ပေးထားကာ Grille အတွက်လည်း Carbon Fiber Trim တွေ ထပ်ထည့် ပေးထားပါတယ်။ အခုလို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးမှုက သာမန် အနည်းငယ်လောက်ပဲ ဖြစ်ပေမယ့် ယခင်ကထက်တော့ အမြင်ပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲ တာမျိုး တွေကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါသေးတယ်။ အခုလို အသစ်ပေါင်းထည့် ပေးထားတဲ့ အပြင် Mugen ရဲ့ ပြင်ဆင်မှုမှာတော့ အနောက်ဘက် အတွက် Roof Spoiler ကို တပ်ဆင် ပေးလိုက်ကာ ဘေးဘက်တွေ ဆီက Rocker Panels တွေရဲ့ အထက်မှာ လည်း Chrome Garnish ကို ထည့်သွင်း ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ Chrome Garnish ကိုတော့ အခြားသော နေရာတွေ ဖြစ်တဲ့ Window Vents တွေမှာလည်း မြင်တွေ့နိုင်ကာ ဘီးတွေကိုလည်း အဆင့်မြှင့်တင် ပေးထားပြီး အခုဆိုရင် ၁၈ လက်မ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ၁၉ လက်မမပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ် နိုင်တော့မှာပါ။
ဒါ့အပြင် အခု Odyssey အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုလည်း ထည့်သွင်း ပေးထား ပါသေးတယ်။ အ ဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Brake Pads တွေကို အရှေ့ ရော အနောက်ရောအတွက် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Mugen အနေနဲ့ကတော့ အခု အဆင့်မြှင့်တင်မှုထဲမှာ Oil Filler Caps ‌တွေကို အေးမြသွားအောင် ဖန်တီး ပေမယ့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Fluid ကစလို့ Brake Reservoir အပေါ်က ကြည့်လို့ သိပ်အဆင်မပြေတဲ့ Cover အထိကိုပါ သေချာစာရင်း ပြုစုပြီး ဖန်တီးပေးထား ပါတယ်။ အဆိုပါ ဒီဇိုင်း ကတော့ ကားမောင်းနေရင်း ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ ဘယ်လို အခြေအနေ မျိုးမှာ မဆို ဖြစ်လာမယ့် Fluids တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဖန်တီးမှုတွေ ဟာ အခြားသော Honda ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ကားတွေအတွက်‌ ကတော့ အနည်းငယ် သံသယဖြစ်စရာ ကောင်းပေမယ့် လည်း အခု Odyssey မှာတော့ တကယ်ကို အံဝင်ဂွင်ကျ နဲ့ အဆင်ပြေနေ တာကို တွေ့မြင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ Minivan ကို 2.0 Liter Hybrid Powertrain ဒါမှမဟုတ် 2.4 Liter Mill နဲ့ ရွေးချယ်ရရှိနိုင်တာ ဖြစ်ကာ နှစ်မျိုးစလုံးကတော့ 200 hp ( 149 kW ) အထိ စွမ်းဆောင် နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိက အတွက် မော်ဒယ် မှာ ဆိုရင်တော့ Odyssey ကို 3.5 Liter V6အနေနဲ့ ရရှိနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အရ 280 hp ( 209 kW ) အထိ ကို ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု အသစ် ဖန်တီးပြီး ထွက် ပေါ်လာတဲ့ Mugen ရဲ့ လက်ရာ အစိတ် အပိုင်း တွေကို အမေရိက ဈေးကွက် မှာ မရရှိနိုင်သည့် တိုင်အောင် နဂိုရှိထားပြီးသား အမျိုးအစား က ပိုမို မြန်ဆန် နေဆဲ ဖြစ်တာ ကြောင့် စိတ် ကျေနပ် လို့ ရတဲ့ အနေအထား ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာ Mugen Makeover ကို ရရှိခဲ့တဲ့ Honda Odyssey ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-20T17:01:11+06:30January 20th, 2021|MYCARS MYANMAR|